ကလေးကအလွဲသုံးစားမှုဘာလဲ? | မိဘများအတွက် USAHello အရင်းအမြစ်များကို | USAHello
USA တွင်ကလေးများနာကျင်လူတွေကိုရပ်တန့်ဖို့ကလေးသူငယ်ကာကွယ်စောင့်ရှောက်သည့်ဥပဒေများရှိပါတယ်. ကလေးကအလွဲသုံးစားမှုနှင့်ပတ်သက်ပြီးလေ့လာပါ, ကလေးသူငယ်ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေး, နှင့်စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေကိုမိဘများလိုက်နာရမည်.
ကလေးသူငယ်အလွဲသုံးစားမှုကလေးများထိခိုက်ကြောင်းဘာမှဆိုလိုတယ်. တစ်စုံတစ်ဦးကလူ့အခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှုတွေကိုသူတို့သားသမီးလိုလျှင်, USA တွင်ကလေးသူငယ်ကာကွယ်စောင့်ရှောက်သည့်ဥပဒေများအစိုးရကကွာအမြိုးသားအယူရမည်ဟုဆိုသညျကား.
ကလေးသူငယ်အလွဲသုံးစားမှုကလေးများနာကျင်သူတို့ရက်စက်ကြမ်းကြုတ်ဖြစ်ခြင်းတို့ပါဝင်သည်. ဒါဟာအစကသူတို့ကိုကောင်းကောင်းပြုစုစောင့်ရှောက်ရေးတာမဟုတ်ပါဘူးအဓိပ္ပာယ်. ကလေးသူငယ်အလွဲသုံးစားမှုကလေးတွေနဲ့အတူလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူများပါဝင်သည်.
သူတို့ထက်အသက်ငယ်လျှင်တစ်ဦးတည်းကလေးတွေစွန့်ခွာမနေပါနဲ့ 12 အသက်အနှစ်
သငျသညျ hit မပြုရ, ပစ်ခြင်း, သို့မဟုတ်ကလေးတွေလှုပ်
သင့်ကလေးကိုစက်ဘီးဦးထုပ်ဝတ်ဆင် Make (အချို့သောပြည်နယ်များအတွက်ဥပဒေ)
ကလေးသူငယ်ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးတာဝန်ခံအစိုးရဌာနများရှိပါတယ်. သူတို့ကကလေးသူငယ်ကာကွယ်စောင့်ရှောက်န်ဆောင်မှုများသို့မဟုတ်မိသားစုန်ဆောင်မှုများဟုခေါ်တွင်စေခြင်းငှါ, သို့မဟုတ်ပဲကလေးန်ဆောင်မှုများ.
တစ်စုံတစ်ဦးကယုံကြည်သည်ဆိုပါကသင်ကကလေးတစ်ဦးအလွဲသုံးစားနေကြတယ်, သူတို့ကလေးန်ဆောင်မှုများကိုပဌနာနှင့်သင်သတင်းပို့စေခြင်းငှါ. သူတို့အလွဲသုံးစားမှုသံသယရှိလျှင်ဆရာဝန်များနှင့်ဆရာမိဘများသတင်းပို့ရမည်.
ကလေးသူငယ်န်ဆောင်မှုများအရာရှိတွေအနေနဲ့စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုမစတင်ပါလိမ့်မယ်. သူတို့ချက်ချင်းအန္တရာယ်လည်းမရှိထင်မထားဘူးဆိုရင်, ကလေးသူငယ်န်ဆောင်မှုများသင်စေရမယ်ဘယ်အရာကိုပြောင်းလဲသငျသညျပွောကွလိမျ့မညျ. သင်တစ်ဦးလူမှုရေးလုပ်သားတရပါလိမ့်မယ်. အဆိုပါလူမှုရေးလုပ်သားတအပြောင်းအလဲများကိုလုပ်သင့်ကိုကူညီလိမ့်မယ်. သငျသညျလကျခံစေခြင်းငှါ:
ကနျြးမာရေး-related န်ဆောင်မှုများ, ထိုကဲ့သို့သောဥစ္စာအလွဲသုံးစားမှုကုသမှုများအတွက်ကုသမှုအဖြစ် (မူးယစ်ဆေးနှင့်အရက်ပြဿနာ)
သင်၏သားသမီးတွေအတွက်အကူအညီ, ထိုကဲ့သို့သောကျူရှင်အဖြစ်, လမ်းညွှန်သို့မဟုတ်အကြံပေးခြင်း
ကလေးန်ဆောင်မှုများသင့်ကလေးကိုအန္တရာယ်ဖြစ်ပါတယ်ထင်လျှင်, သူတို့ပျောက်သင့်ကလေးယူပါလိမ့်မယ်. သူတို့ကတရားဥပဒတရားရုံးရန်သင့်ကိစ္စတွင်ရည်ညွှန်းပါလိမ့်မယ်.
သူတို့ရဲ့မိဘများထံမှယူကလေးများတစ်ဦးမွေးစားအိမ်သို့သွားပါ. ဤသည်ကိုအခြားမိသားစုဝင်များနှင့်အတူသို့မဟုတ်သူစိမ်းတွေနဲ့ယာယီနေရာဖြစ်သည်. သင်၏သားသမီးအိမ်ပြန်လာနိုင်မီသင်ပိုကောင်းတဲ့မိဘဖြစ်နှင့်သင့်အိမ်မှာဘေးကင်းလုံခြုံစေနိုင်သည်ကိုပြသရန်လိုအပ်မည်.
သငျသညျစော်ကားခံရသောသူသည်ကလေးတစ်ဦး Are? သို့မဟုတ်သင်သိကလေးတစ်ဦးအကူအညီလိုပါဘူး? ခေါ်ရန် 800-422-4453
အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ကလေးသူငယ်အလွဲသုံးမှု Hotline ဖွင့် 24 နာရီတစ်ရက်,7ရက်ပေါင်းတစ်ပါတ်. hotline တိုင်ပင်မှူးမတ်ထက်ပိုမပြောတတ်သောသူဘာသာပြန်များရှိ 200 ကလေးများကိုကူညီဘာသာစကားများ. အဆိုပါ hotline တိုင်ပင်မှူးမတ်သင်မည်သူမသိရပါဘူး, သငျတို့သညျသူတို့ကိုပြောပြရန်မလိုပါ. ဒါပေမဲ့သူတို့ကသငျသညျအဘယ်သို့ပြုရမည်ကိုဆုံးဖြတ်ကူညီပေးပါမည်. ခေါ်ရန် 1-800-422-4453 - ပြီးတော့တွန်းအားပေး 1 တစ်ဦး hotline တိုင်ပင်ပြောပြရန်.
ဤစာမျက်နှာပေါ်ရှိအချက်အလက်တွေကနေကြွလာ အမေရိကန်အစိုးရ နှင့်အခြားယုံကြည်စိတ်ချရသောသတင်းရင်းမြစ်. ဒါဟာလမ်းညွှန်မှုများအတွက်ရည်ရွယ်သည်နှင့်အမျှမကြာခဏတတ်နိုင်သမျှမွမ်းမံ. USAHello ဥပဒေရေးရာအကြံဉာဏ်ကိုမပေးပါဘူး, မဟုတ်သလိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ပစ္စည်းများမဆိုဥပဒေရေးရာအကြံဉာဏ်ကိုအဖြစ်ခေါ်ဆောင်သွားခံရဖို့ရည်ရွယ်ထားပါသည်. သင်တစ်ဦးအခမဲ့သို့မဟုတ်တန်ဖိုးနည်းရှေ့နေသို့မဟုတ်တရားဝင်အကူအညီရှာနေနေတယ်ဆိုရင်, ငါတို့သည်သင်တို့ကိုကူညီနိုငျ အခမဲ့နှင့်တန်ဖိုးနည်းဥပဒေရေးရာန်ဆောင်မှုကိုရှာဖွေ.